15 ka ciyaar ee ugu wanaagsan ee looxa ciyaaraha | I sii wakhti firaaqo
Isaac | 20/12/2021 15:56 | La cusbooneysiiyay 20/12/2021 16:01 | General
ka ciyaaraha guddiga door-ciyaar u baahan xus aan ahayn inta ka hartay ciyaaraha guddiga, maadaama lagu meeleeyay inay ka mid yihiin kuwa ugu la qabatimay oo ay door bidaan isticmaaleyaasha qaarkood. Waxay u yimaadeen inay abuuraan xamaasad weyn, oo leh taageerayaal u labisan sida jilayaasha ciyaarahan, kuwaas oo naqshadeeya 3D-daabacan ama qalab gacmeed, kuwaas oo naqshadeeya oo rinjiye tirooyinka iyaga u gaar ah, iwm. Waxay xitaa xidheen dad badan oo aan ahayn buugaag aad u taageersan, waxay hagaajiyaan awoodaha maskaxda, dareenka iskaashiga, iwm.
Dhammaan qandhada si sax ah uga timaadda waxa ciyaarahan ka dhigaya kuwo ka duwan, waana taas immersion ciyaaryahan weyn ee ogol. Ciyaarahani waxay sheegaan sheeko, dejiyaan ciyaarta, ciyaartoyduna waa jilayaasha ay tahay inay galaan door ama door, sidaas darteed magacooda. Tacabur loogu talagalay kuwa doonaya inay ku noolaadaan xaalado xiiso leh iyo tacaburyo cajiib ah.
1 Hagaha doorashada ciyaaraha door-ciyaareedka ugu fiican
1.1 Dugeyaal iyo jiidiyaal
1.2 Isha madow
1.5 Dhulalka Xaaraanti ah
1.6 Halyeyga 5-ta siddo
1.8 Dayrta Avalon
1.9 Sayidka Siddooyinka: Safarrada Dhulka Dhexe
1.11 Mugdi baaxad leh
1.12 Qarow: Horror Adventures
1.13 Argah argax
2 Waa maxay RPG-ga?
3 Noocyada ciyaaraha door-ciyaar
3.1 Sida habka ciyaarta
3.2 Sida ku xusan mawduuca
4 Sida loo doorto ciyaarta door-ciyaareedka ku habboon
Hagaha doorashada ciyaaraha door-ciyaareedka ugu fiican
Qaar ka mid ah ciyaaraha guddiga door-ciyaareedka ugu cajiibsan oo aad iibsan karto, iyo kuwa ugu iibinta badan qaybtan, waxaa ka mid ah:
Dugeyaal iyo jiidiyaal
Qalabka Muhiimka ah ee Dungeons
Waa mid ka mid ah ciyaaraha guddiga door-ciyaar heer sare ah. Mid ka mid ah kuwa ugu baahsan adduunka. Waa ciyaar iskaashi khiyaali ah oo kugu hakisa caalam sixir ah. Waxay ku habboon tahay da'da 10 jir, waxaana lagu ciyaari karaa inta u dhaxaysa 2 ilaa 4 ciyaartoy. Dhexdeeda waa inaad doorataa dabeecadaada oo aad la dagaallanto daanyeerka astaanta u ah, oo aad ku noolaato tacabur cusub mar kasta, maadaama go'aan qaadashada iyo fursadda ay ka dhigan tahay inaysan mar walba isku mid ahayn. Intaa waxa dheer, toganku waa in aad heli doonto buugaag badan oo leh sheekooyin iyo mawduucyo kala duwan oo aad ka dooran karto ama aad ururinayso.
Iibso Dungeons & Dragons Tacaburku wuu bilaabmayaa Iibso Qalabka Bilowga Muhiimka ah
Waa mid kale oo ka mid ah Classics-ka, waxaana laga joogaa dhowr iyo toban sano tan iyo markii ciyaartan Jarmalka la bilaabay. Daabacaadda 5-aad waxaa loo tarjumay Isbaanishka, si taageerayaasha halkan ay sidoo kale ugu raaxaystaan ​​​​dhacdooyinka cajiibka ah ee Aventuria, qaarad ay ka buuxaan halyeeyo, jilayaal dahsoon, xayawaanno iyo xayawaan qariib ah, kuwaas oo jilayaasha ay ku ciyaari doonaan geesiyaal.
Isha Madow Iibso
Devir Pathfinder. Xeerarka...
Magacan kale waa mid ka mid ah ciyaaraha doorka-ciyaareedka ugu caansan ee loo yaqaan. Halkaa, ciyaaryahan kastaa wuxuu yeelan doonaa doorka hal-abuure oo ay tahay inuu ku noolaado adduun cajiib ah oo ay ka buuxaan sixir iyo shar. Buuggu waxa ku jira xeerarka ciyaarta, maamulaha ciyaarta, iyo xeerarka samaynta jilayaasha cajiibka ah, fursadaha higgaadda, iwm. Ciyaar ku habboon in la bilaabo marka la eego fududaanteeda.
Ciyaarta Roleplaying ee Warhammer...
Warhammer wuxuu u baahan yahay horudhacyo kooban, waxaa aad looga yaqaanaa ciyaaraha fiidyaha iyo waliba ciyaaraha looxa-doorka. Ciyaar khiyaali ah oo xasuusinaysa WoW ama Warcraft siyaabaha qaarkood, maadaama ay kuu geynayso adduunkii hore ee gothic-ka oo ay ku badan yihiin makhluuqa cabsida leh, geesiyaal, siraha iyo khataraha.
Soo iibso Warhammer
Dhulalka Xaaraanti ah
Dhulka Mamnuuca ah ee Quetzel's...
Waxaa sameeyay Daabacaada Ururka Xorta ah, oo siinaya khibrad aad u wanaagsan qaab dugsiyeedkii hore ee saafiga ahaa. Hadda waxa ay ku soo gashay daabacadeeda cusub oo wata makaanik cusub si ay ugu noolaadaan tacaburrada dhulalka xaaraanta ah. Xaaladdan oo kale, ciyaartoygu maaha inay ciyaaraan geesiyaal, laakiin waa tuugo iyo kuwa soo duulay oo samayn doona wax kasta oo ay ku noolaan karaan adduunka habaaran ee aan dadka deggani kala saari karin runta iyo halyeeyga.
Iibso dhulalka xaaraanta ah
Halyeyga 5-ta siddo
Ciyaaraha Duullimaadka Fantasy - The ...
Ciyaaraha Baahida waxay abuureen ciyaarta guddiga RPG-ga oo leh dejin ku salaysan khiyaali bariga. Waxay ku taal Rokugan, meel khayaali ah oo ku taal Japan feudal. Intaa waxaa dheer, waxaa ku jira qaar ka mid ah saameynta Shiinaha, taasina waxay kugu dhejineysaa kabaha samurai, bashi, shugenja, suufi, iwm.
Iibso Halyeyga 5-ta siddo
Gloomhaven daabacaaddii 2aad -...
Daabacaaddii labaad ee Gloomhaven sidoo kale waxaa loo turjumay Isbaanishka. Ciyaartaani maaha mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagula taliyay in lagu bilaabo adduunka door-ciyaar, laakiin waxa ay si aad ah loogu talagalay xirfadlayaasha. Ciyaaryahan kastaa wuxuu qaataa doorka calooshood u shaqeystayaal ku dhex milmay adduun khiyaali ah oo kobcaya. Si wada jir ah ayay u wada shaqayn doonaan oo ay ku dagaalami doonaan ololeyaal kala duwan oo isbedelaya iyadoo ku xidhan tallaabooyinka la qaaday.
Iibso Gloomhaven 2
Caqli wasakhaysan: Dayrta...
Mid kale oo ka mid ah cinwaannada loogu talagalay xirfadlayaasha. Magaca door-ciyaareedkan wuxuu isku daraa halyeeyada Arthurian, khuraafaadka Celtic, iyo sheeko qoto dheer oo fara badan oo u oggolaanaysa caqabadaha in siyaabo kala duwan loo wajaho mar kasta oo ciyaarta la ciyaaro. Waa inaad sameysaa go'aamo aad u adag, sidoo kale qaar u muuqda kuwo aan muhiim ahayn, laakiin si weyn wax u beddeli kara mustaqbalka fog. Diyaar ma u tahay?
Iibso Dayrta Avalon
Sayidka Siddooyinka: Safarrada Dhulka Dhexe
Ciyaaraha Duullimaadka Fantasy -...
Magaca JRR Tolkien kaliya ma noqon filim iyo ciyaar muuqaal ah, waxa kale oo uu ku yimaadaa sidii ciyaar-door-ciyaareedka guddida xidhmadan. Dhexdeeda waxaad ku dhex milmi doontaa safarro aad ku dhex marayso dhulka Dhexe, oo leh tacabur iyo jilayaasha khuraafaadka ugu badan ee sheekadan. Dhaqdhaqaaqa ciyaartu waxa ay u qaybsantaa ololeyaal, iyo rafifications, si ay kuugu yaabto xataa haddii aad marar badan ciyaarto...
Iibso Sayidka Fardaha
Scythe ee Isbaanishka
Kadib dambaskii dagaalkii 1920aad ee aduunka, waxaa albaabada loo laabay magaalada caasimadda ah ee loo yaqaan La Fábrica, taasoo soo jiidatay indhaha wadamada deriska qaarkood. Xaqiiqda barbar-dhigga ah ee la dhigay XNUMX-kii iyo taas oo ciyaaryahan kasta uu ciyaari doono wakiil ka socda shanta qaybood ee Bariga Yurub, isku dayaya inuu helo nasiib iyo sheegasho dhul ku wareegsan Warshadda dahsoon.
Soo iibso Scythe
Mugdi baaxad leh
Madadaalada Edge -...
Mugdi weyni wuxuu bixiyaa waayo-aragnimo fantastik ah oo ku saabsan qaabka caadiga ah ee dhabta ah. Ciyaar looxa oo casri ah, waxqabad leh oo leh waxyaabo aad u yar oo cajiib ah iyo ciyaar aad u fudud. Waxay diiradda saartaa ficilada geesiyaasha, iyada oo aan loo baahnayn ciyaaryahan si uu u noqdo hage si loo xakameeyo cadawga.
Iibso mugdi weyn
Qarow: Horror Adventures
Caqli-xumo- qarow - Ciyaar...
Istaraatiijiyad, caqli-gal, hal-abuurnimo, iskaashi ... dhammaan waxay ku dhex milmeen tacabur argagax leh halkaas oo aad naftaada dhex geliso adduun ay ka buuxaan yaabab iyo waxyaalo qarsoon. Ciyaaryahan kastaa wuxuu qaadan doonaa doorka wiilka Crafton, waana inuu ogaado cidda dishay aabihiis isagoo baaraya tilmaamihii hore ee guriga qoyska.
Soo iibso qarow
Duulimaadka Fantasy - Arkham...
Ciyaar naxdin iyo jilid oo ku geynaysa magaalada Arkham, taas oo ay ku hanjabayaan makhluuqa aakhiro. Ciyaartoyda waa inay ku biiraan xoogaggooda, iyagoo qaadanaya doorka baarayaasha, si ay u badbaadiyaan xaalada khatar gelinaysa aduunka oo dhan. Hadafku waa in la ururiyo tilmaanta iyo agabka lagama maarmaanka u ah in laga hortago kuwii hore oo laga hortago qorshahooda xun.
Iibso Arkham Horror
Xijaabka - Ciyaarta...
Ciyaarta door-ciyaartu waxa ay leedahay mawduuc cyberpunk ah, oo ah goob ay tignoolajiyadu ku riixday bani-aadmiga xadkeeda, iyo halka ay adagtahay in la kala saaro inta u dhaxaysa tan dhabta ah iyo tan khiyaaliga ah. Sidaa darteed, waa inaad hogaamisaa iska caabbinta (in kasta oo xaqiiqda ah in qayb ka mid ah jidhkaaga ay tahay farsamada ...) si aad isku daydo inaad xaddido tignoolajiyada waxyeellada badan geysatay. Waxaa dhiirigeliyay shuqullada caanka ah sida Blade Runner, Kaarboon la beddelay, iyo The Expanse.
Waa maxay RPG-ga?
Sawir bilaash ah (Ciyaarta Guddiga Carruurta) oo ka socota https://torange.biz/childrens-board-game-48360
Kuwa aan weli garanayn waa maxay ciyaarta guddiga door-ciyaarWaa ciyaar la mid ah ciyaaraha kale qaarkood, laakiin waa in ciyaartoydu ay door ama door ka ciyaaraan. Si tan loo sameeyo, waxay leedahay qaab dhismeed aasaasi ah:
Agaasimaha ciyaaraha: Marka ay bilaabato koorsada ciyaar-ciyaareedka, waxaa had iyo jeer kormeera mid ka mid ah ciyaartoyda u dhaqmi doona sida agaasime ama master master. Isagu waa hagaha iyo sheeko-yaqaanka ciyaarta, kan sharraxa muuqaallada, qayb aasaasi ah oo ka sheekayn doonta sheekada oo u dhaqmi doonta dhexdhexaadiyaha u dhexeeya ciyaartoyga ka qaybgalaya. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ciyaari kartaa jilayaasha aan lagu sifeynin ciyaartoyda kale, sida jilayaasha labaad. Doorka kale ee maamuluhu waa inuu masuul ka yahay xeerarka la raacayo. Si tan loo sameeyo, waxay noqon doontaa mid leh buugga ciyaarta mar walba.
Ciyaartoyda: waxay noqon doonaan inta kale ee qaata door ama door kale oo ka duwan agaasimaha ciyaaraha, kuwaas oo guud ahaan jilaya halyeeyada sheekada. Ciyaaryahan kastaa wuxuu yeelan doonaa xaashida dabeecadiisa, oo leh sifooyinka, kartida iyo xogta kale ee muhiimka ah ee dabeecadda ay doorteen. Waxa kale oo aad ku dari kartaa tafaasiisha kale sida dharka aad xidhan tahay, hubka, kartida, taariikhdaada, alaabta awooda, iwm.
Khariidadaha: waxay u adeegaan si ay u dhigaan jilayaasha inta lagu jiro ciyaarta. Waxay noqon karaan sawir-gacmeed, loox, ama muuqaalo 3D ah, muuqaalo dhab ah, qalab iyo qurxiyo, iwm.
Waxyaabahan oo dhan, ciyaartoygu wuxuu go'aansan doonaa, oo leh taageero fursad laadhuu, ficilada aad sameyso dabeecadaada, iyo agaasimaha ciyaarta ayaa go'aamin doona haddii falalkaas la samayn karo iyo in kale, dhibaatada, iyo in sharciyada la ixtiraamo. Intaa waxaa dheer, sayidku wuxuu kaloo go'aamin doonaa ficilada NPC-yada ama jilayaasha aan ciyaartoyga ahayn.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in ciyaaraha guddiga door-ciyaar waa wada shaqayn, oo aan u tartamin sida ciyaaraha kale. Sidaa darteed, ciyaartoydu waa inay wada shaqeeyaan.
Noocyada ciyaaraha door-ciyaar
Waxaa ka mid ah noocyo iyo kala duwanaansho Ciyaaraha guddiga door-ciyaartu waa qaybaha soo socda:
Sida habka ciyaarta
Sida laga soo xigtay sida loo ciyaaro ciyaarta door-ciyaar, waxaad kala saari kartaa:
Miis: kuwaas oo ah kuwa lagu tilmaamay maqaalkan.
Toos: taas oo lagu samayn karo goobaha dabiiciga ah, dhismooyinka, iwm, oo leh dharka ama qurxinta sifada.
Boosta- Waxaa loo ciyaari karaa markooda iyadoo la isticmaalayo emails, inkastoo aysan ahayn habka ugu fiican ama ugu dhakhsaha badan. Hadda iimaylka iyo abka fariimaha degdega ah ayaa dardar geliyay hawshan.
Ciyaaraha fiidiyowga RPG: nooca dhijitaalka ah ee ciyaaraha door-ciyaareedka miiska dushiisa.
Sida ku xusan mawduuca
Sida laga soo xigtay theme ama style Ciyaarta door-jiidka, waxaad ka heli kartaa:
Taariikh ahaan: iyadoo laga duulayo dhacdooyinkii dhabta ahaa ee soo maray taariikhda aadanaha, sida dagaalladii, duullaankii, qarniyadii dhexe, iwm.
Khayaali: inta badan waxay isku daraan qaybo ka mid ah taariikhda, guud ahaan laga soo bilaabo qarniyadii dhexe, iyo xubno ka mid ah khiyaaliga, sida ku darida saaxiriinta, trolls, orcs, iyo makhluuqa kale ee khuraafaadka ah. Tusaale ahaan, RPG-yada khiyaaliga-dhexe-dhexe.
Argagax iyo argagaxMid kale oo ka mid ah mawduucyada loogu talagalay dadka jecel nooca nuxurka, oo leh qarsoodi, khiyaano iyo cabsi. Shaqooyinka HP Lovecraft ayaa dhiirigeliyay qaar badan oo iyaga ka mid ah. Intaa waxaa dheer, waxaad ka heli doontaa iyaga oo ka mid ah rooxaanta, daanyeerka, zombies, vampires, werewolves, makhluuqaadka shaybaarrada sayniska ama cilmi-baarista milatariga, iwm.
Uchrony: waa xaqiiqo kale, taas oo soo bandhigaysa sida ay dhacdo dhab ahi noqon doonto marka laga eego dhinaca kale. Tusaale ahaan, adduunku sidee buu ahaan lahaa haddii Jarmalku uu ku guulaysan lahaa dagaalkii labaad ee aduunka, iwm.
Khiyaaliga mustaqbalka ama mala-awaalka sayniska: ku salaysan mustaqbalka aadanaha, ama meel bannaan. Waxaa jira kala duwanaansho badan halkan, sida ciyaaraha ku salaysan duni raaga ka dib, ee gumeysiga meerayaasha, cyberpunk, iwm.
Space Opera ama fantasy heer sare ah: nooc-hoosaadka la xidhiidha kii hore, laakiin halka ay khiyaaliyada saynisku tahay hal qayb oo kale oo goobta ah. Tusaale ahaan waxay noqon kartaa caalamka khayaaliga ah ee Star Wars, halkaas oo ay jirto khayaali sayniska, laakiin waxay ku dhacdaa ku dhawaad ​​​​khiyaali hore.
Sida loo doorto ciyaarta door-ciyaareedka ku habboon
Dooro ciyaar wanaagsan Shaxda door-ciyaartu waa mid fudud, maadaama aad si fudud diiradda u saarayso dhawr qodob oo muhiim ah, sida:
Da ': aad bay muhiim u tahay, sida ciyaaraha kale ee guddiga, in da'da loo naqshadeeyay la garto. Dhammaantood ma haystaan ​​nuxur ku habboon da' kasta, maadaama ay ku jiri karaan sawirada dadka waaweyn, erayada xun, iyo xitaa kuwa aad ugu adag carruurta yaryar. Waa muhiim in la aqoonsado da'da kala duwan ee ay ciyaari doonaan, oo ay u socdaan kuwa ku habboon.
Tirada ciyaartoyda- Arrin kale oo ay tahay in la tixgeliyo waa tirada ciyaartoyda ay taageerayaan. Haddii aad la ciyaari doonto saaxiibo ama qoys badan, waxaa muhiim ah in ciyaartoy ama kooxo kugu filan la ogolaado, si aan qofna looga tagin.
Tiyaatarka: tani waa arrin dhadhan, oo waa inaad doorataa midka ugu habboon dookhaaga. Waxaa jira khayaali saynis, nooca jiidi iyo godad, oo leh mawduuca cyberpunk, apocalyptic, iwm.
Fursadaha geyntaInta badan ciyaaraha door-ciyaartu waxay ku lug leeyihiin isticmaalka looxa ama uma baahna wax gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar ayaa laga yaabaa inay u baahdaan meel bannaan si ay u fidiyaan, ama walxo dheeraad ah. Waxaa muhiim ah in aad ku xisaabtanto fursadahaaga iyo haddii aad si fiican u ciyaari karto ciyaarta dowliga ah ee goobta aad haysato iyo agabka aad haysato, haddii lagu ciyaari karo meelo bannaan iwm.
Awooda wax ka beddelkaQaar ka mid ah ciyaaraha doorka-ciyaartu waxay taageeraan heer aad u sarreeya oo is-beddelid, inaad awood u leedahay inaad ku darto jilayaashaaga ama tirooyinkaaga, abuurto qurxinta si aad u isticmaasho sida looxa ciyaarta, iwm. Sameeyayaasha iyo kuwa jecel DIY-ga iyo farsamada gacanta, waxa hubaal ah in ay door bidaan ciyaaraha door-ciyaareedkan oo kale, kaas oo sidoo kale ka caawin doona in ay horumariyaan hal-abuurkooda iyo mala-awaalkooda si ay u abuuraan noocyadooda. Tusaale ahaan, qaar ayaa si fudud ugu dara buug leh tilmaamo iyo sheeko, goobtana adiga ayaa abuuri kara. Kuwa kale waxaa ku jiri kara waxa loogu yeero modules ama xaalado ka dhigaya shaqadaada mid fudud.
Ciyaaraha door-ciyaareedka xirfadeed: qaar ayaa xoogaa kakan waxaana loogu talagalay xirfadlayaasha noocaan ah. In kasta oo hiwaayaddayaashu ay sidoo kale baran karaan oo ay noqon karaan pro, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan ahayn kuwa ugu fiican ee lagu bilaabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Ciyaaraha guddiga door-ciyaareedka ugu fiican
Ciyaaraha guddiga ugu fiican abid